Praiminisitra Maraokana Miantso “Fitoniana” Taorian’ny Fifandonana Niteraka Tsikera Marobe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2017 11:10 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, عربي, Português, Español, English
Pikantsarin'ny lahatsary ‘El Othmani Miantso ny Vahoakan'i “Rif ho Tony”, lahatsary nampidirin'ilay mpisera Akhbar feakhbar tamin'ny 28 Jiona 2011. Loharano: YouTube.
Niantso “fitoniana” tao an-tanàna avaratr'i Hoceima ny praiminisitra ao Maraoka Saadeddine El Othmani, taorian'ny nanaovan'ny mpitandro ny filaminana famoretana an-kerisetra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny fetiben'ny Eid al-Fitr tamin'ny Alatsinainy.
Nipoaka ny fifandonana rehefa niezahana nosakanana ny fihetsiketsehana mitaky ny famotsorana an'ireo mpikatroka voafonja avy ao amin'ny Hirak, hetsi-panoherana malaza tontosaina ao amin'ny faritra Hoceima.
Naharitra ny fihetsiketsehana tao Hoceima hatramin'i ahitana an'i Mouhcine Fikri, mpivaro-tondro maty voahitsaky ny kamiao mpitatitra fako tamin'ny Oktobra 2016.
Niteraka hetsika manohitra ny manampahefana ao an-toerana sy ny polisy voalaza fa mpanao kolikoly sy fihoaram-pefy ny zava-nitranga, saingy nivoatra tsikelikely lasa hetsika eny ifotony hanaovana fitarainana izany, tahaka ny fanaovana an-jorombala ny toekarena sy ny sosialy ao amin'ny faritra be tendrombohitra Rif ao amin'ny firenena.
Nitifitra etona mandatsa-dranomaso sy nampiasa kibay tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny polisy ary hita nanome totohondry satria niezaka nanaparitaka ny vahoaka izy ireo. Nilaza ny tatitra tany am-boalohany tamin'ny Alatsinainy fa olona 132 no voasambotra, na izany aza, misy ny tsy fifanarahana eo amin'ny tarehimarika tena marina.
Tamin'ny Zoma, nitatitra ny fampahalalam-baovao Rif Akhbar amin'ny teny Arabo fa 97 no voasambotra, araka ny tarehimarika ofisialin'ny governemanta.
Voalohany ny fanambaran'i El Othmani tamin'ny fampahalalam-baovao Maraokana hatramin'ny nipoahan'ny fifandonana tamin'ny Alatsinainy hariva. Nilaza koa izy fa namolavola drafitra hijerena manokana ny fitakian'ny mpanao fihetsiketsehana mikasika toekarena sy sosialy, saingy nanoritra fa ilaina ny “manome fitoniana mba hiasàna eny ifotony ary mandresy lahatra ny mpampiasa vola mba hiasa ao amin'ny faritra . “
Tao amin'ny gazety amin'ny teny Arabo ‘Hespress’, nitsikera ny fanirian'ny praiminisitra ho amin'ny fitoniana tahaka ny tsy sahaza ilay mpahay siansa ara-politika Maraokana, Bilal Allada, nanameloka azy ho tsy mahavita miatrika ny olana momba ireo gadra politika.
Tsy fantatra raha hisy fiantraikany eo amin'ny hetsi-bahoaka ny tenin'ny praiminisitra, izay mbola tsy mety mandefa solontena hihaona amin'ireo manampahefanan'ny antoko voafidy sy ny minisitry ny governemanta mba hifanakalo hevitra.
Nisalasala ilay mpanao gazety Maraokana, Souhail Karam hoe mety hanova ny zava-misy eny ifotony ny antson'i El Othmani:
Inona no fiovana hoentin'ny fanambaran'ny praiminisitra Maraoka? Azo antoka fa tsy misy. Mahafantatra ireo mpikambana ao amin'ny antokony manokana fa tsy mahafantatra ny tena olana izy
Manizingizina ny maro amin'ireo mpanao fihetsiketsehana fa ny firotsahan'ny mpanjaka Mohamed VI ihany no afaka manamora ny krizy miharatsy, saingy mbola tsy nandray anjara mivantana ny lapan'ny mpanjaka.
Nandritra ny faran'ny herinandro, naneho ny “tsy hafaliany, ny fahakaviany sy ny ahiahiany” noho ny fahatarana amin'ny tetikasa fampandrosoana ara-toekarena voalahatra ho an'i Hoceima i Mohamed VI. Niantso ny hanaovana fanadihadiana mikasika ny tsy fisian'ny fandrosoana izy taorian'ny fivorian'ny filankevitry ny governemanta niaraka tamin'ireo minisitra ambony.
Na dia izany aza, satria miha-mitombo ny fisamborana ao Hoceima, nitranga ho fitakiana lehibe ao Hirak ny famotsorana ireo gadra .
Lasa niha-matetika ny fihetsiketsehana satria nosamborin'ny manampahefana tamin'ny 29 May i Mohamed Zefzafi, mpikatroka sady mpikarakara ny Hirak malaza. Miantso ny famotsorana azy miaraka amin'ireo mpikatroka hafa eo amin'ny 100 eo ny mpanohana an'i Zefzafi.
Tsy naneho hevitra mikasika izay mety ho famotsorana an'ireo gadra i El Othmani, na dia namaly ny fitakian'ireo mpikatroka sy mpanao gazety izay nilaza fa niharan'ny fampijaliana nandritra ny fanagadrana aza izy, maneho fitokisana ny rafi-pitsarana ao Maraoka izy hanatontosa fanadihadiana mikasika ireo fitarainana rehetra sy hanome dingana ara-pitsarana araka ny tokony ho izy.